Shir dhaqaale loogu yaboohayo Yemen oo ka furmayaa Geneva | Radio Baidoa
Guriga Wararka Maanta Shir dhaqaale loogu yaboohayo Yemen oo ka furmayaa Geneva
Shir dhaqaale loogu yaboohayo waddanka Yemen ayaa waxa uu maanta ka furmayaa xarunta Qaramada Midoobay ay ku leedahay magaalada Geneva.
Qaramada Midoobay ayaa waxa ay rajaynaysaa inay lacago u aruuriso waxa ay ku tilmaantay dhibaatada bini’aadnimo ee ugu xun caalamka, halkaas oo 22 milyan oo qof oo ka mid 27-ka milyan ee qof ee dalkaasi u dhalatay ay haatan gargaar u baahan yihiin, tiradaas oo 3.4 milyan oo qof ka badan middii gargaarka u baahneyd sanadkii la soo dhaafay.
Hasayeeshee qaar ka mid ah wadammada deeqda bixiya ee ka qeybgalaya shirkaasi ayaa sidoo kale waxa ay hub ka iibiyaan dalalka ku lugta leh coladda Yemen ka taagan.
Colaadda Yemen ayaa waxaa ku burburay wax kasta oo ay ku noolaan karaan shacabka dalkaasi, sida adeegyada caafimaadka, cunnada, biyaha iyo goobaha shidaalka.
Inkastoo ay hay’adaha samafalka si joogta ah uga digaan xaaladda dalkaasi, ayaa Yemen weli waxa ay qarka u saaran tahay macluul, halka alaabaha lasoo waarido ee asaasiga u ah noolasha shacabkaasi si joogta ah looga horjoogsado wadankaasi.
Dhaqaalaha ay ku deeqi doonaan dalalka maanta ku shiraya Geneva ayaa ah mid loo baahan yahay, balse qaar badan oo ka mid ah dalalkaasi ayaa la kala safan dhinacyada isku haya colaadda Yemen, halka kuwa kalena ay hubka ka iibiyaan.
Hay’adaha gargaarka ayaa u sheegi doona deeq-bixiyayaasha in wax bixinta oo keliya aan wax looga qaban karin dhibaatada Yemen, balse loo baahan yahay dadaal dhab ah oo ku aaddan nabada dalkaasi, taasoo ay qeyb ka tahay in si wanaagsan loo xakameeyo hubka ay soo dhoofsanayaan dhinacyada ku loolamaya awoodda waddankaasi.